ဆံပင်ညှပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးလိုက်သူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ Lob Hair စတိုင်လ် (၁၀)မျိုး - For her Myanmar
ဆံပင်ညှပ်မယ်လို့ စိတ်ကူးလိုက်သူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ Lob Hair စတိုင်လ် (၁၀)မျိုး
Bob Hair ပဲ သိတယ်.. ဘာလဲ Lob Hair ဆိုတာက… ဆိုရင်တော့ဖြင့်….
နှစ်ဟောင်းကုန်ဖို့ က ၂ လ လောက်ပဲ ကျန်တော့တယ် ဆိုတော့ နောက်နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ် လူသစ် စတိုင်သစ်နဲ့ လန်းနိုင်ဖို့ နှစ်သစ် မရောက်ခင်ကတည်းက စဉ်းစားရွေးချယ်ထားလို့ရအောင် ဘယ်တော့မှ ရိုးမသွားဘဲ အမြဲတမ်းဆန်းသစ်နေမယ့် ဆံပင် စတိုင်လေးတွေကို Megan က ပြောပြမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
အဲဒီဆံပင် စတိုင်လေးတွေကိုတော့ Lob Hair လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ဘာလို့ Lob Hair လို့ ခေါ်လဲဆိုတာကတော့ – Lob hair ဆိုတာ Long နဲ့ Bob haircut ကို ပေါင်းပြီးခေါ်လိုက်တာပါ။ Bob haircut ဆိုတာကိုတော့ ယောင်းတို့အားလုံး သိပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမား ဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းရဲ့  ဇနီး ဗစ်တိုးရီးယားဘက်ခမ်းက နေ စလို့ ဟောလိဝုဒ်ဆယ်လီတော်တော်များများပါ ညှပ်ဖူးကြတဲ့ ဆံပင်ပုံစံ တခုဖြစ်ပါတယ်။ ဂုတ်ဝဲ အနေလောက် ဆံပင်လေးတွေကို Bob Hair လို့ ခေါ်ပြီး Long hair နဲ့ Bob Hair ကြား အရှည်မှာ ရှိတဲ့ ဆံပင်ကို တော့ Lob Hair လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အရမ်း မရှည်လွန်း အရမ်းမတိုလွန်းတဲ့ ဆံပင်ပုံစံမျိုးတွေပေါ့ ယောင်းတို့ရေ။
ကဲ… Lob hair ကို သိပြီးပြီဆိုတော့ အခု Megan က ဟောလိဝုဒ် က ဆယ်လီတွေကြားမှာ Trend ဖြစ် (ခေတ်စား)နေတဲ့ Lob haircut ဆံပင် ပုံစံလေးတွေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုးညှပ်ရင် အဆင်ပြေလောက်မယ်ဆိုတာလေးကို ဖော်ပြပေးမယ်နော်..
ဘယ်က စညှပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေရင်တော့ ဘယ်လိုမျက်နှာကျ ပုံစံမျိုးနဲ့ မဆိုလိုက်ဖက်တဲ့ ပုခုံးကျော်အရှည်ရှိပြီး မျက်နှာဘေးတဖက်ကို ဆံနွယ်လေးတွေကျနေတဲ့ Emma Stone ရဲ့ ဆံပင်ပုံစံလေးကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ..
ခေတ်ဆန်ပြီး သွက်လက်တဲ့အသွင်ကို သဘောကျတယ်ဆိုတဲ့ ယောင်းတို့ကတော့ ဂျက်စတင်ဘီဘာရဲ့  မဟေသီလေး ညှပ်ထားတဲ့ ကမ်းခြေပုံစံ လှိုင်းတွန့်ပါတယ်ဆိုရုံ ပြေပြေလေးနဲ့ လန်းနေတဲ့ lob hair ပုံစံလေးကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်..
ဆံပင်ကောက်သားရှိတဲ့ ယောင်းတို့ကတော့ ဒီလို ဆံပင်ပုံအလန်းလေးဖြစ်ဖို့ လေယာတွေ (အလွှာတွေ) အထပ်ထပ်ညှပ်ပြီး ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်နော်။ လူကြားထဲမှာ ထင်းခနဲ ဖြစ်နေဖို့ အရောင်တောက်တောက်ပါ ဆိုးလိုက်ရင်တော့ လုံးဝကို အမိုက်စားပေါ့။
ဒါကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၉၀ ပြည့်နှစ်တွေက စူပါမော်ဒယ်တွေရဲ့  စတိုင်မျိုးပြန်လည် ခေတ်စားလာတာပါ။ ဆံပင်အနက်ရောင်ကိုမှ လှိုင်းသေးတွန့်တွန့်ကောက်ကောက်လေးတွေ အများကြီးကလည်း တစ်ကြော့ပြန် ခေတ်စားလာတာမို့ ဒီဆံပင်စတိုင်လ်က ယောင်းတို့ကို ထင်ရှားစေနိုင်ဦးမှာပါ။
ဒီပုံလေးကျတော့ လုံးဝကို သဘာဝဆန်ဆန် စတိုင်မျိုးပါ။ လှိုင်းပြေလေးတွေနဲ့ ရိုးရှင်းလှတဲ့ lob hair ဆံပင်စတိုင်ကို Indian မင်းသမီးလေး Priyanka Chopra ရဲ့  ပုံမှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Related Article >>> ယောင်းတို့စမ်းကြည့်သင့်တဲ့ ကေပေါ့စတားတို့ရဲ့ဆံပင်ပုံစံတွေ
ရှေ့ဆံပင် ကို ဆံမြိတ်ညှပ်တဲ့ အခါ တညီတည်း တိတိညှပ်တဲ့ ပုံမျိုး မဟုတ်ဘဲ ရှေ့ကို ဟိုဘက် ဒီဘက် ခွဲထားတဲ့ပုံစံမျိုး ကို Curtain bangs လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ပခုံးမရောက်တရောက် ဆံပင်အရှည်နဲ့ Curtain Bangs နဲ့ ပေါင်းလိုက်တော့ သိမ်မွေ့မှုနဲ့ လှပတဲ့ ဆံပင်စတိုင်လ်လေးတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။
ဒီပုံလေးကျပြန်တော့ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ အသွင်ကို ဖြစ်စေမယ့် ဆံပင်စတိုင်လေးပဲနော် ယောင်းတို့။ လှိုင်းပြေပြေလေးနဲ့ ရှေ့ဆံမြိတ်မျှင်မျှင်လေးတွေနဲ့ ဒီ Lob hair လေးက ယောင်းတို့ကို ရှိရင်းစွဲ အသက်ထက် နုပျိုစေမှာ အမှန်ပါ။
ပုခုံးလောက်ဆံပင်ရှည်လေးကို အဖျားမှာ ပြန်ကွေးထားတဲ့ ဆံပင် ဝိုက်ဝိုက်လေးနဲ့ နဖူးမှာ ဘာဆံမြိတ်မှ ချမထားဘဲ ပြောင်ရှင်းနေတဲ့ ဒီစတိုင်လေးကျတော့ နေ့စဉ်ရုံးတက်နေရတဲ့ ယောင်းယောင်းလေးတို့အတွက် လိုက်ဖက်မယ့် Lob hair လေးပေါ့။
စမတ်ကျပြီး ထက်မြက်တဲ့အသွင်ဖြစ်စေမယ့် ဒီ Lob Hair စတိုင်လ်လေးကိုလည်း မေ့ထားလို့မရဘူးနော်.. နဖူးကို ဆံခြည်တစ်မျှင်မှ မချဘဲ အပြောင်သိမ်းထားတဲ့ ဂုတ်ဝဲ ဆံပင်တိုလေးနဲ့ emilia clarke ကို ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ဒီဆံပင်စတိုင်လ်လေးက ဘယ်လောက်တောင် လန်းလဲ သိနိုင်ပြီပေါ့..
ကိုယ့်ရဲ့  မျက်နှာကျပုံစံလေးကို ပိုပြီး ထင်ပေါ်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ lob hair စတိုင်လေးက ရွေးချယ်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံးပါ ယောင်းတို့ရေ။ ရိုးရှင်းတဲ့ ပုခုံးကျော်ရုံ ဆံပင်ရှည်လေးက ယောင်းရဲ့  မျက်နှာကို ပိုပြီး အချိုးကျကျ လှပနေစေနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုဆိုရင်တော့ ဆံပင်တော့ညှပ်ချင်တယ်၊ ဘယ်လိုညှပ်ရင်ကောင်းမလဲမသိဘူးဆိုတဲ့ ယောင်းတို့အတွက် အိုင်ဒီယာလေးတွေ ရသွားလောက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်..
Ref: Google, www.marieclaire.com
Bob Hair ပဲ သိတယျ.. ဘာလဲ Lob Hair ဆိုတာက… ဆိုရငျတော့ဖွငျ့….
နှဈဟောငျးကုနျဖို့ က ၂ လ လောကျပဲ ကနျြတော့တယျ ဆိုတော့ နောကျနှဈသဈမှာ စိတျသဈ လူသဈ စတိုငျသဈနဲ့ လနျးနိုငျဖို့ နှဈသဈ မရောကျခငျကတညျးက စဉျးစားရှေးခယျြထားလို့ရအောငျ ဘယျတော့မှ ရိုးမသှားဘဲ အမွဲတမျးဆနျးသဈနမေယျ့ ဆံပငျ စတိုငျလေးတှကေို Megan က ပွောပွမိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။အဲဒီဆံပငျ စတိုငျလေးတှကေိုတော့ Lob Hair လို့ ချေါပါတယျ။
ဘာလို့ Lob Hair လို့ ချေါလဲဆိုတာကတော့ – Lob hair ဆိုတာ Long နဲ့ Bob haircut ကို ပေါငျးပွီးချေါလိုကျတာပါ။ Bob haircut ဆိုတာကိုတော့ ယောငျးတို့အားလုံး သိပွီးသားဖွဈလိမျ့မယျထငျပါတယျ။ ကမ်ဘာကြျောဘောလုံးသမား ဒေးဗဈဘကျခမျးရဲ့ ဇနီး ဗဈတိုးရီးယားဘကျခမျးက နေ စလို့ ဟောလိဝုဒျဆယျလီတျောတျောမြားမြားပါ ညှပျဖူးကွတဲ့ ဆံပငျပုံစံ တခုဖွဈပါတယျ။ ဂုတျဝဲ အနလေောကျ ဆံပငျလေးတှကေို Bob Hair လို့ ချေါပွီး Long hair နဲ့ Bob Hair ကွား အရှညျမှာ ရှိတဲ့ ဆံပငျကို တော့ Lob Hair လို့ ချေါပါတယျ။ အရမျး မရှညျလှနျး အရမျးမတိုလှနျးတဲ့ ဆံပငျပုံစံမြိုးတှပေေါ့ ယောငျးတို့ရေ။ ကဲ… Lob hair ကို သိပွီးပွီဆိုတော့ အခု Megan က ဟောလိဝုဒျ က ဆယျလီတှကွေားမှာ Trend ဖွဈ (ခတျေစား)နတေဲ့ Lob haircut ဆံပငျ ပုံစံလေးတှနေဲ့ ဘယျလိုမြိုးညှပျရငျ အဆငျပွလေောကျမယျဆိုတာလေးကို ဖျောပွပေးမယျနျော..
ဘယျက စညှပျရမှနျးမသိဖွဈနရေငျတော့ ဘယျလိုမကျြနှာကြ ပုံစံမြိုးနဲ့ မဆိုလိုကျဖကျတဲ့ ပုခုံးကြျောအရှညျရှိပွီး မကျြနှာဘေးတဖကျကို ဆံနှယျလေးတှကေနြတေဲ့ Emma Stone ရဲ့ ဆံပငျပုံစံလေးကို ရှေးခယျြနိုငျပါတယျ ယောငျးတို့ရေ..
ခတျေဆနျပွီး သှကျလကျတဲ့အသှငျကို သဘောကတြယျဆိုတဲ့ ယောငျးတို့ကတော့ ဂကျြစတငျဘီဘာရဲ့ မဟသေီလေး ညှပျထားတဲ့ ကမျးခွပေုံစံ လှိုငျးတှနျ့ပါတယျဆိုရုံ ပွပွေလေေးနဲ့ လနျးနတေဲ့ lob hair ပုံစံလေးကို ရှေးခယျြနိုငျပါတယျ..
ဆံပငျကောကျသားရှိတဲ့ ယောငျးတို့ကတော့ ဒီလို ဆံပငျပုံအလနျးလေးဖွဈဖို့ လယောတှေ (အလှာတှေ) အထပျထပျညှပျပွီး ဖနျတီးနိုငျပါတယျနျော။ လူကွားထဲမှာ ထငျးခနဲ ဖွဈနဖေို့ အရောငျတောကျတောကျပါ ဆိုးလိုကျရငျတော့ လုံးဝကို အမိုကျစားပေါ့။
ဒါကတော့ လှနျခဲ့တဲ့ ၉၀ ပွညျ့နှဈတှကေ စူပါမျောဒယျတှရေဲ့ စတိုငျမြိုးပွနျလညျ ခတျေစားလာတာပါ။ ဆံပငျအနကျရောငျကိုမှ လှိုငျးသေးတှနျ့တှနျ့ကောကျကောကျလေးတှေ အမြားကွီးကလညျး တဈကွော့ပွနျ ခတျေစားလာတာမို့ ဒီဆံပငျစတိုငျလျက ယောငျးတို့ကို ထငျရှားစနေိုငျဦးမှာပါ။
ဒီပုံလေးကတြော့ လုံးဝကို သဘာဝဆနျဆနျ စတိုငျမြိုးပါ။ လှိုငျးပွလေေးတှနေဲ့ ရိုးရှငျးလှတဲ့ lob hair ဆံပငျစတိုငျကို Indian မငျးသမီးလေး Priyanka Chopra ရဲ့ ပုံမှာ တှနေို့ငျပါတယျ။
Related Article >>> ယောငျးတို့စမျးကွညျ့သငျ့တဲ့ ကပေေါ့စတားတို့ရဲ့ဆံပငျပုံစံတှေ
ရှဆေံ့ပငျ ကို ဆံမွိတျညှပျတဲ့ အခါ တညီတညျး တိတိညှပျတဲ့ ပုံမြိုး မဟုတျဘဲ ရှကေို့ ဟိုဘကျ ဒီဘကျ ခှဲထားတဲ့ပုံစံမြိုး ကို Curtain bangs လို့ ချေါပါတယျ။ ပခုံးမရောကျတရောကျ ဆံပငျအရှညျနဲ့ Curtain Bangs နဲ့ ပေါငျးလိုကျတော့ သိမျမှမှေု့နဲ့ လှပတဲ့ ဆံပငျစတိုငျလျလေးတဈခုကို ပိုငျဆိုငျနိုငျမှာပါ။
ဒီပုံလေးကပြွနျတော့ ငယျရှယျနုပြိုတဲ့ အသှငျကို ဖွဈစမေယျ့ ဆံပငျစတိုငျလေးပဲနျော ယောငျးတို့။ လှိုငျးပွပွေလေေးနဲ့ ရှဆေံ့မွိတျမြှငျမြှငျလေးတှနေဲ့ ဒီ Lob hair လေးက ယောငျးတို့ကို ရှိရငျးစှဲ အသကျထကျ နုပြိုစမှော အမှနျပါ။
ပုခုံးလောကျဆံပငျရှညျလေးကို အဖြားမှာ ပွနျကှေးထားတဲ့ ဆံပငျ ဝိုကျဝိုကျလေးနဲ့ နဖူးမှာ ဘာဆံမွိတျမှ ခမြထားဘဲ ပွောငျရှငျးနတေဲ့ ဒီစတိုငျလေးကတြော့ နစေ့ဉျရုံးတကျနရေတဲ့ ယောငျးယောငျးလေးတို့အတှကျ လိုကျဖကျမယျ့ Lob hair လေးပေါ့။
စမတျကပြွီး ထကျမွကျတဲ့အသှငျဖွဈစမေယျ့ ဒီ Lob Hair စတိုငျလျလေးကိုလညျး မထေ့ားလို့မရဘူးနျော.. နဖူးကို ဆံခွညျတဈမြှငျမှ မခဘြဲ အပွောငျသိမျးထားတဲ့ ဂုတျဝဲ ဆံပငျတိုလေးနဲ့ emilia clarke ကို ကွညျ့လိုကျရငျတော့ ဒီဆံပငျစတိုငျလျလေးက ဘယျလောကျတောငျ လနျးလဲ သိနိုငျပွီပေါ့..
ကိုယျ့ရဲ့ မကျြနှာကပြုံစံလေးကို ပိုပွီး ထငျပျေါစခေငျြတယျဆိုရငျတော့ ဒီ lob hair စတိုငျလေးက ရှေးခယျြဖို့ အသငျ့တျောဆုံးပါ ယောငျးတို့ရေ။ ရိုးရှငျးတဲ့ ပုခုံးကြျောရုံ ဆံပငျရှညျလေးက ယောငျးရဲ့ မကျြနှာကို ပိုပွီး အခြိုးကကြ လှပနစေနေိုငျပါတယျ။
ဒီလိုဆိုရငျတော့ ဆံပငျတော့ညှပျခငျြတယျ၊ ဘယျလိုညှပျရငျကောငျးမလဲမသိဘူးဆိုတဲ့ ယောငျးတို့အတှကျ အိုငျဒီယာလေးတှေ ရသှားလောကျမယျလို့ ထငျပါတယျနျော..လနျးနိုငျကွပါစကှေယျ..
Tags: cutting, Fashion, hair, Hair Style, Lob Hair, Style
နိုဝင်ဘာလအတွင်း လက်ထပ်ကြတော့မယ့် Deepika နဲ့ Ranveer
စိတ်ကျရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွဲမှားနေတဲ့ အယူအဆများ
Megan October 22, 2018